June 24, 2021 - ApannPyay Media
သိပြီးပြီလား မတ်တပ်ရပ်နေစဉ် ရေမသောက်သင့်တဲ့အကြောင်း
June 24, 2021 by ApannPyay Media
သိပြီးပြီလား မတ်တပ်ရပ်နေစဉ် ရေမသောက်သင့်တဲ့အကြောင်း ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို ရေ(၈)ခွက်သောက်တာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက ရေသောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ သောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာပါပဲ။ လူတော်တော်များများဟာ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိပ်ပြီး မသိရှိကြသလို သတိလည်း မထားမိတတ်ကြပါဘူး။ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ရေသောက်တဲ့အခါမှာ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားနဲ့ မသောက်သင့်ဘူးဆိုတာကို အံ့အားသင့်စွာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁။ အဆစ်ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင် မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြင့် ရေသောက်တဲ့အလေ့အထဟာ ကြာလာတဲ့အခါမှာ အဆစ်ရောင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားလာရနိုင်ပါတယ်။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အဆစ်အဆက်များဆီသို့ အရည်ဓာတ်စီးဆင်းမှုကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရာမှတစ်ဆင့် အဆစ်ရောင်ရောဂါအတွက် အစလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ၂။ အစာခြေစနစ်ကို ထိခိုက်စေ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရေသောက်ခြင်းကြောင့် ရေတွေဟာ အစာအိမ်နံရံတွေမှာ ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် စီးဆင်းစေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စီးဆင်းမှုဟာ … Read more
ခေါင်းအုံးမပါပဲ အိပ်စက်ခြင်းကြောင့် ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်သလဲ
ခေါင်းအုံးမပါပဲ အိပ်စက်ခြင်းကြောင့် ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်သလဲ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပထမဦးဆုံးခေါင်းအုံးကို ရှေးဟောင်း မက်ဆိုပိုတေးမီးယားလူမျိုးများက တီထွင်ခဲ့ကြတာပါ။ ထိုခေါင်းအုံးသည် ကျောက်တုံးဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုက်ဆံချမ်းသာသောလူကုံထံများသာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ ရှေးဟောင်းခေါင်းအုံးနဲ့ မတူတဲ့အချက်ကတော့ ယနေ့ခေတ်ခေါင်းအုံးများသည် ပျော့ပျော့အိအိဖြင့် နူးညံ့ပြီး အချို့သူများဆိုလျှင် ခေါင်းအုံးအကြီးကြီးကို ဖက်၍မအိပ်ရလျှင် အိပ်မပျော်ကြပါဘူး။ တကယ်တမ်းတော့ ခေါင်းအုံးဖြင့် အိပ်စက်ခြင်းသည် သင် ထင်သလောက် ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ ခေါင်းအုံးမပါဘဲ အိပ်စက်ခြင်းကြောင့် ခံစားရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများကတော့ ခါးနာခြင်းကို သက်သာစေခြင်း ခေါင်းအုံးမပါဘဲ အိပ်စက်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားသည် တစ်ဖြောင့်တည်းဖြစ်နေပြီး သင့်ရဲ့ကျောရိုးသည်လည်း ပုံသဏ္ဍာန်မှန်မှန်ဖြင့် အိပ်စက်အနားယူနိုင်ပါတယ်။ သင်က မကြာခဏ ခါးနာတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းအုံးမပါဘဲ အိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ လည်ပင်းနာခြင်းကို သက်သာစေခြင်း ခေါင်းအုံးအများစုက သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အနေအထားမှန်အောင် မပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းအုံးက မြင့်နေမယ်ဆိုရင် … Read more
ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြား တဲ့အဆီချအဆိပ်ထုတ် Detox Water လုပ်နည်း
ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြား တဲ့အဆီချအဆိပ်ထုတ် Detox Water လုပ်နည်း ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားလာတဲ့ကျန်းမာရေး အထောက်အကူုပြုနည်းလေးပါ ပါဝင်ပစ္စည်းများ -သံပုရာသီး (အဆီချ) -သခွားသီး (အဆိပ်ပြေ) -ဂျင်း (အပူအပုတ်ကင်း) -ပူစီနံ (သွေးလည်ပတ်မှုကောင်း) -ရေအေး အဆင့် (1) -သံပုရာသီး ။ သခွားသီး ။ ဂျင်း တို့ကို ပါးပါးလှီးပါ ရေဆေးပါ ( ဂျင်း ကိုထောင်းပြီးလည်းထည့်နိုင်သည်ထောင်းပြီး ဂျင်းအရည်ကုန်အောင် ညှစ်ပြီးရေပြန်ဆေးပါ) အဆင့် (2) -ပူစီနံ အနည်းငယ်ကို ရေဆေးပြီးအသင့်ထားပါ အဆင့် (3) -ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသန့်စင်အောင်ဆေးကြောပြီး နှစ်သက်ရာ ဘူးခွံ (ရေသန့်ဘူး) ထဲတွင်ထည့်ပါ အဆင့် (4) -အသင့်ထည့်ပြီး ရေဘူးကို ရေခဲသေ့တ္တာ (သို့) အေးမြသည့်နေရာ အရိပ်အောက် တွင် 3နာရီမှ 5နာရီထားပြီး … Read more
HEAVY RAIN နိုင်တဲ့ နေရာတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ညီမလေး SU SU SAN
HEAVY RAIN နိုင်တဲ့ နေရာတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ညီမလေး SU SU SAN Heavy Rain နိုင်တဲ့ ပြည်နယ်များ……. heavy rain….. မြစ်ကြီးနား ဝိုင်းမော် ဆဒုံး ကိုင်ပိုက်တီ လိုင်ဇာ မူဆယ် ကွမ်လုံ လောက်ကိုင် SU SU SAN (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအနည်းငယ်မှ အားအသင့်အတင့် ရှိနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်ကျား၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ နေပြည်တော်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ … Read more
ဝက်ခြံ တင်းတိတ် အမာရွတ်နဲ့ အဆီဖုတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရရင် ဟိုရက်က သီရိသုံးနေတဲ့ အိမ်တွင်းသဘာဝ skincare နည်းလေး တင်ပေးမယ်ဆိုပြောထားတာလေး လာပါပီနော် ၀က်ခြံ တင်းတိတ် အမာရွတ်နဲ့ အဆီဖုတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရရင် သဘာဝအိမ်တွင်း skincare နည်းလေးပြောပြပေးမယ် အိမ်တွင်းနည်းဆိုပေမယ့် ပိုလှချင်ရင်တော့ ပိုက်ဆံတော့ အကုန်အကျခံပေါ့ ဒါကတော့ တစ်မျိုးပဲလိုတယ် အာလူးသီး အာလူးကို ရေစင်အောင်ဆေး အခွံနွှာ တစ်ဝက်ပဲနွှာ အကုန်နွှာလိုက်ရင် သွေးတဲ့အခါ ချောချောကြီး ဖြစ်ပြီး သွေးမကောင်းတော့ဘူးရယ်☺️ သနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကို သန့်နေအောင်ဆေးပါ မျက်နှာလိမ်းမှာမို့ သန့်နိုင်သမျှသန့်နေအောင် စင်နေအောင်ဆေး အာလူးသီးလိမ်းဖို့သပ်သပ် ကျောက်ပျဉ်အသေးလေးဝယ်ထားတာ ပိုကောင်းတယ် မျက်နှာကို facial foam နဲ့ စင်အောင်သစ်ပေးပါ အခွံနွှာထားတဲ့ အာလူးကို ရေနည်းနည်းနဲ့ ကျောက်ပျဉ်ပေါ်သွေးရမ် သွေးလို့ရလာတဲ့အရည်လေးတွေကိုမျက်နှာအနှံ့လိမ်းပေးပါ လိမ်းပြီးပြီဆိုရင် … Read more
ခြင်တွေ ပြေးအောင် သင့်ရဲ့ အိမ်ထဲမှာ ဒီအပင်လေး (၅) ပင် စိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော် မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ သောင်းကျန်းလွန်းတဲ့ခြင်တွေကို ခြင်ဆေးခွေ၊ ခြင်ဖျန်းဆွေးတွေနဲ့ နှိမ်နှင်းနေတုန်းလား? ဒါက အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ နှိမ်နှင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်ရှိတဲ့ အိမ်တွေဆိုရင် ပိုပြီးတောင် အန္တရာယ်များလွန်းပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အန္တရာယ်မများဘဲ သဘာဝနည်းလမ်းတွေနဲ့ ခြင်တွေပြေးစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဟာ အပင်လေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အပင်စိုက်တာလည်းဝါသနာပါတယ်၊ ခြင်တွေကိုလည်း သဘာဝနည်းလမ်းအတိုင်း နှိမ်နှင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေဖြစ်မှာပါ။ ပြီးတော့ ခြင်ပြေးပင်လေးတွေဟာ မိမိတို့မီးဖိုခန်းအတွက်လည်း အသုံးဝင်တာကြောင့် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြင်ပြေးပင်လေးတွေကို စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မိမိတို့မီးဖိုခန်းရဲ့ ငွေယိုပေါက်က တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကာကွယ်နည်းလည်း ရောက်ပါတယ်။ ကန်စွန်းပင် ကန်စွန်းပင်လေးတွေ ပွင့်ချိန်မှာ ခြင်တွေ ပြေးတယ်ဆိုတဲ့ … Read more
ကျောင်း မီးလောင်တော့ ပေပင်ပေါ်ကြွသွားတဲ့ ရုပ်ပွားတော်
ကျောင်း မီးလောင်တော့ ပေပင်ပေါ်ကြွသွားတဲ့ ရုပ်ပွားတော် စလင်းမြို့ လက်ပံပင်ကျောင်းတိုက်မှာကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူတဲ့ရတနာမဉ္စူ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ဟာ အလောင်းစည်သူမင်းလက်ထက် ကတည်းကထုလုပ်ပူဇော် ထားခဲ့တယ်လို့ ဘုရားသမိုင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။သရက္ခန်သားနဲ့ ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့ဘုရားငါးဆူ အနက်တစ်ဆူ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အများသိကြတဲ့အညာသီဟတောဘုရားနဲ့ညီအစ်ကို ဆင်းတုတော်တွေပါ။ တစ်ခါက ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိန်းဝပ်စံပါယ်တော်မူရာ အဆောင်ကို (သူတို့ကတော့ စာတိုက်လို့ ခေါ်ပါတယ်) မီးလောင်သွားတော့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် အပါအဝင်တမြို့လုံး ယူကြုံးမရ ဖြစ်ကြရပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် မီးလောင်ပြီးနောက်ပိုင်း ရက်တွေမှာ’မာလာရှင်ကျော် ပေပင်ပေါ်မှအမြန်ချလော့’ ဆိုပြီး ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကိုအိပ်မက်ပေးပါ သတဲ့။ ခဏ ခဏ မက်ပါများလာတဲ့ အခါဆရာတော်လည်းကျောင်းသားတွေကိုပေပင်ပေါ် တက်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့ အားလုံးကမီးလောင်သွားပြီလို့ ထင်နေကြတဲ့ရတနာမဉ္စူ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုပေပင်ပေါ်မှာ စံပါယ်နေတာ တအံ့တသြ တွေ့ကြရပါသတဲ့။ ဒီတော့မှကျောင်းဆောင် မီးလောင်တော့ပေပင်ပေါ် ကြွသွားတဲ့ ဘုရား ဆိုပြီး တန်ခိုးကြီးမှန်းသိကာ ကြည်ညို ပူဇော်သူပိုမိုများပြား … Read more
နေထီးဆောင်းနေတာပါ အတိတ်နမိတ်ကောင်းပီဗျာ မြန်မာတွေရဲ့ ယူဆချက်တခုဖြစ်တဲ့ အတိတ်နိမိတ်တွေက ရှေးပဝေသဏီထဲက ရှိခဲ့ကြတာပါ အခုလို နေထီးဆောင်းခြင်း၊ လခမောက်ဆောင်းခြင်း၊ ဥက္ကာပျံကျခြင်း၊ တော်လဲခြင်း စတဲ့ အတိတ်နိမိတ်၊ ဘဝေါ စတဲ့ အယူတွေကို ကော်လူလေ့ရှိကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီလိုမျိုး နေထီးဆောင်းတယ်ဆိုတာ မြန်မာ ဘုရင် တွေ နန်းကျချိန် တို့မင်းလောင်ပေါ် တဲ့ အချိန် တို့တိုင်းပြည် မှာ စစ်မဲ့ပေး အငတ်ဘးတို့ဆိုက်တဲ့ သဘာဝဘေး အန္တရယ်တွေနဲ့ တွေ့တတ်တဲ့ နိမိတ်လို့ လိုယူဆနေကြပါတယ်။ Credit ေနထီးေဆာင္းေနတာပါ အတိတ္နမိတ္ေကာင္းပီဗ်ာ ျမန္မာေတြရဲ့ ယူဆခ်က္တခုျဖစ္တဲ့ အတိတ္နိမိတ္ေတြက ေရွးပေဝသဏီထဲက ရွိခဲ့ၾကတာပါ အခုလို ေနထီးေဆာင္းျခင္း၊ လခေမာက္ေဆာင္းျခင္း၊ ဥကၠာပ်ံက်ျခင္း၊ ေတာ္လဲျခင္း စတဲ့ အတိတ္နိမိတ္၊ ဘေဝါ စတဲ့ အယူေတြကို … Read more
ပန်းရောင်းနေရင်း ရုတ်တရက် လူမှုကူညီရေး ကားအနောက်ကို ပြေးလိုက်လာတဲ့ ကောင်လေး
ပန်းရောင်းနေရင်း ရုတ်တရက် လူမှုကူညီရေး ကားအနောက်ကို ပြေးလိုက်လာတဲ့ ကောင်လေး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ယခု တင်ဆက် ပေးသွားမှာကတော့ မနေ့ကဗျာ ကျနော်တို့ရဲ့ အရေးပေါ် ကားသွားတာကို ပန်းရောင်းနေတဲ့ ကလေးငယ် ညီလေးတစ်ဦးက လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ ကားလည်းမြင်ရော သူပန်းရောင်းလို့ ပြီးတာနဲ့ ကားနောက်ကို အတင်းပြေးလိုက်လာတယ်။ အဲ့ဒါ ကျနော်ကတွေ့မိတော့ ကားရပ်ဖို့ပြောပြီး ကားရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲ့ညီလေးကလည်း တစ်ကိုယ်လုံး ရွှံ့တွေပေလို့ဗျာ။ မိုးတွင်းဆိုတော့လည်း။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော်က ခုနက ပြေးလိုက်လာလို့ ညီလေး ဘာလို့ ပြေးလိုက်လာတာလဲလို့ မေးလိုက်တော့ သား အကိုတို့နဲ့ လိုက်ချင်တယ်။ သားလည်း အကိုတို့လို သူများတွေကို လိုက်လှူပြီး ကူညီချင်လို့တဲ့ဗျာ။ ကျနော် ဘာပြောရမှန်းတောင်ဘမသိလိုက်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီ ညီလေးကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း ပန်းရောင်းနေရတာ။ … Read more
အမြဲတမ်း မုသာဝါဒကရှောင်ခြင်း ပါရမီကုသိုလ်ကြောင့် ဖြစ်တည်လာခဲ့သည့် ဥဏ္ဏလုံံ (ခေါ် ) မွေးရှှင်တော်
အမြဲတမ်း မုသာဝါဒကရှောင်ခြင်း ပါရမီကုသိုလ်ကြောင့် ဖြစ်တည်လာခဲ့သည့် ဥဏ္ဏလုံံ (ခေါ် ) မွေးရှှင်တော် ဥဏ္ဏလုံံ (ခေါ် ) မွေးရှှင်တော် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ နဖူးအလယ်မှာ ပါရှိတဲ့ ဥဏ္ဏလုံခေါ် (မွေးရှင်)တော်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ (၃၂)ပါးသော မဟာပုရိသ လက္ခာဏာကြီးထဲက တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် ။ ဓမ္မစကြာတရား ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင် ရောင်ခြည်တော် ဘုရားပင့်ရွတ်ဆိုရာမှာ ပထမဆုံးအစချီရွတ်ဆိုတာက ” အင်္ဂီရသဿ ဥဏ္ဏာယ ” အင်္ဂီရသဿ -အယုတ်အလတ် အမြတ်ပိုင်းခြား လွန်ကြိုးစားသည့်သုံးပါးဆယ်လီ ပါရမီတော် အဟုန်တို့ကြောင့်ခြောက်ရောင်စုံ ကွန်မြူးလျှက်အင်္ဂီရသ ဘွဲ့ထူးခံသည့်ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားကြီး၏ ဘမုကန္တရေ မျက်ခုံးတော် နှစ်သွယ်အလယ်ဗဟို တည့်တည့်၌သဉ္ဇာတာယ နုဖြူထွားထွား ကောင်းစွာပေါက်ဖွား၍နေသော ဥဏ္ဏာယ စ -ဆွဲလို့ဆန့်လျှင် နှစ်တောင်ခန့် ရှည်လျားသဖြင့်စိန်သားနှစ်အသွင် ငွေနန်းချည် အမျှင်ကဲ့သို့ ဖြူစင်ဝင်းသစ် … Read more